Horudhac: Manchester United vs Crystal Palace… (Red Devils oo raadinaysa inay guul ku furato horyaalka Premier League fasal ciyaareedkan) – Gool FM
Horudhac: Manchester United vs Crystal Palace… (Red Devils oo raadinaysa inay guul ku furato horyaalka Premier League fasal ciyaareedkan)
Haaruun September 19, 2020
(Manchester) 19 Sebt 2020. Kooxda Manchester United ayaa xilli ciyaareedkeeda 2020-21 horyaalka Premier League si habsami leh u bilaabaysa caawa marka ay Crystal Palace ku soo dhaweynayaan garoonkooda Old Trafford.
Muddo bil uun kaddib xilli ciyaareedkoodii 2019-20 ee ku dhammaaday semi-finalka Europa League, kooxda Ole Gunnar Solskjaer ayaa ku soo laabanaysa tartanka Premier League toddobaadkan, marka loo eego kooxaha badankood oo ay ku jirto Palace oo ololahan ku bilaabay horyaalka guul 1-0 ah oo ay ka gaareen Southampton.
Taariikhda: Sabti 19 Sebt 2020
Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa miisaamaysa inay u gacan geliso saxiixeeda cusub ee xagaagan, Donny van de Beek kulankiisii ugu horreeyey tartan rasmi ah.
Paul Pogba iyo Mason Greenwood ayaa diyaar u ah kulankan, kaddib markii ay dhammeysteen karantiilkooda Korona Fayras.
Liiska dheer ee dhaawacyada Kooxda Crystal Palace waxaa ka mid ah Gary Cahill, James Tomkins iyo Patrick van Aanholt.
Mamadou Sakho ayaa ku soo laabtay EFL Cup bartamihii asbuucaa,n waxaana laga yaabaa inuu ciyaaro kulankan, halka Christian Benteke, Connor Wickham iyo Jairo Riedewald xaaladooda la qiimeynayo.
>- Guuldarrada kaliya ee Manchester United ka soo gaartay 22 kulan oo Premier League ah ayaa timid kulan ka mid ahaa xilli ciyaareedkii hore, kaasoo ay Palace ku badisay 2-1.
>- Kooxda Palace ayaana dhalisay kaliya 10 gool 22-kaas kulan.
>- The Eagles Kooxda lagu naynaaso ayaa isku dayeysa inay noqoto kaliya kooxdii todobaad ee kulamo xiriir ah oo horyaalka Premier League ah guul ku soo gaarta garoonka Old Trafford.
>- Kooxda Palace ayaanan laga adkaan afartii kulan ee ugu dambeysay ee ay marti u ahaayeen labada kooxood ee Manchester, waxaana ay ka haystaan labo guul iyo labo barbaro.
>- Ma jirto koox badisay kulankeedii furitaanka Premier League in ka badan Manchester United oo sidaas sameysay 19 jeer.
>- Waxay raadinayaan reer Man Utd inay guuleystaan kulankoodii lixaad oo isku xiga oo furitaanka ah markii ugu horreysay taariikhdooda.
>- Kooxda Ole Gunnar Solskjaer ayaan laga badinin 14-kii kulan ee ugu danbeeyay ee xilli ciyaareedkii hore, iyagoo helay muddadaas 32 dhibcood.
>- Man United ayaa laga badiyay kaliya hal kulan oo ka mid ah 17-kii kulan ee ugu dabeeyay ee horyaalka ay ku ciyaareen garoonkooda Old Trafford, waxaana ay haystaan sagaal guul iyo todoba barbaro.
>- Red Devils ayaa goolal dhalisay 13 kulan oo isku xiga oo horyaalka ah, iyadoo wadar ahaan ay dhalisay 30 gool.
>- Guushii Crystal Palace ee isbuucii la soo dhaafay ayaa ahayd guushoodii ugu horreysay ee horyaalka muddo sagaal kulan ah, waxayna haysteen hal barbaro iyo todoba guuldarro.
>- Waxay raadinayaan inay xilli ciyaareedka ku bilaabaan guul is-daba-joog ah markii ugu horreysay taariikhda kooxda kulammada heerka koowaad ee horyaalka.
>- The Eagles ayaa laga badisay afartii kulan ee ugu dambeeyay oo ay marti ahaayeen kulammada bannaanka ee ay martida ahaayeen kal ciyaareedkii 2019-20, waxaana ay wadar ahaan dhaliyeen 0-11.
>- Wilfried Zaha ayaa raadinaya inuu shabaqa soo taabto kulammo isku xiga Premier League markii ugu horreysay tan iyo bishii November sanadkii 2019-kii, Si kastaba, ciyaaryahanka reer Ivorian ayaa dhaliyay kaliya hal gool 19 kulan oo bannaanka uu ku soo ciyaaray horyaalka xilli ciyaareedkii hore.
>- Macallin Roy Hodgson ayaa laga badiyay 13 ka mid ah 17-kii kulan ee horyaalka oo isagoo tababare ah uu ka hortagay Kooxda Manchester United, waxaana uu afarta kulan ee kale uu kala kulmay 3 guul iyo 1 barbaro.
>- Kooxda Crystal Palace ayaa ku guuldarreysatay inay gool dhaliso afarteedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay bannaanka ku soo ciyaartay horyaalka Premier League.
>- Crystal Palace ayaa guuldarro la kulantay afarteedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay marti ahayd horyaalka Premier League.
Horudhac London Derby: Arsenal vs West Ham United… (Gunners oo guulo xiriir ah ku bilaaban karta horyaalka Premier League)